Ra’iisal Wasaare Rooble Oo Danjiraha Turkiga Ee Muqdisho Kala Hadlay Taageerada Ay Siiyaan Soomaaliya - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Muqdisho(ANN)-Ra’iisal Wasaaraha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa kala hadlay Safiirka Dawladda Turkiga u jooga Muqdisho sidii ay dawladda Turkigu usii wadi lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya.
Sidaana waxa lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra’iisal wasaaraha Somalia kulankaa kaddib oo soo gaadhay shebekaddaha Araweelo News Network.
Qoraal saxaafadeedka ayaa u dhignaa sidan:-
“Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Danjire Mehmet Yilmaz ayaa adkeeyey xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeya labada dal.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka Soomaaliyeed aysan marna ilaawi doonin abaalka Turkiga, ugana mahad-celinayaan taageerada iyo waxqabadka muuqda ee suurageliyey in waddankeena uu tallaabo horey u qaado, isagoo xusay in Xukuumaddiisu ay sii adkeyn doonto xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhexeeya. Sida lagu sheegay qoraalka.
“Xidhiidhka aan la wadaagno Turkiga waa mid ahmiyad gaar ah u leh bulshada Soomaaliyeed iyo sidii ay dib ugu soo kaban lahayd.Waxaan uga mahad celineynaa Dowladda Turkiga iyo shacabkeeda garab istaaggii ay inoo muujiyeen xiliyadii adkaa ee nasoo maray iyo mashaariicyadii ay ka fuliyeen dalkeenna welina u taagan yihiin garab istaaggeena”.
Dhinaca kale qoraal saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmet Yilmaz uu dhankiisa balan qaaday in ay sii wadi doonaan sidii ay usii wadi lahaayeen inay garab istaagaan dadka Soomaaliyeed, isagoo xusay ahmiyadda ay leedahay in la sii dardargeliyo taageerada aan shuruudda aan shuruuda lahayn ee dawladdisu siiso Soomaaliya.